Etazonia: Ny Taokanton’ny Hetsika “Bodoy” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Febroary 2012 11:34 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Italiano, Español, srpski, Dansk, English
Ity lahatsoratra ity dia isan'ny fandrakofanay manokana ny #Bodoy ny Tontolo.
Ny faritra feno famoronan'ny Hetsika Bodoy i Wall Street dia manome sary an-tsaina tontolo iray izay malalaka ny olona ao aminy maneho ny heviny momba ny fahalalahana, ny fitoviana, ary ny hatezerana noho ny rafitra iray kitoatoa itambaran'ny tombontsoan'ireo vondron'orinasa vaventy sy ny governemanta. Mpisehatra, mpanakanto, mpanoratra sy mpiangaly mozika no nanome voninahitra ny aingam-panahy nentin'ny #Occupy ary nangataka ny hisian'ny andro iray manerantany ho an'ny asa famoronana amin'ny 12 Febroary 2012.
Ny Kanto ho an'ny Maso sy ny Bodoy
Ny hetsika Bodoy i Los Angeles dia nanangana rindrina iray mampiseho ‘pieuvre’ iray mahatsiravina entina anehoana ny Bankin-Tahiry Federaly ao Etazonia miaraka amin'ireo rantsany katsentsitra mijabaka hatrany amin'ny fiainana sy ny tokantranon'ny olona any. Lavabe ireo rantsany kantsetsitra ireo, tonga hatrany ivelan'ny faritra ivelany mihitsy. Tsy misy tokantrano afa-miala amin'izany.
'Sary an-drindrin'ilay Biby be Fed' ao Los Angeles. Sary avy amin'i Mikey Wally tao amin'ny Flickr (CC BY-NC-ND)
Raha nidona tamin'ny farany ny hetsika fibodoana ary voarara tsy hibahana toerana natao ho an'ny daholobe, ilay sary an-drindrina kosa dia nahazo ny fiarovan'ireo manampahefana ao an-tanànan'i Los Angeles, isan'ireny ny ben'ny tanàna, izay nanondro ilay sary an-drindrina ho toy ny vavolombelon'ny tantara. Raha ny marina dia misy tolo-bidy iray mba hahitàna toerana malalaka iray taza-mason'ny daholobe ho an'ilay sary an-drindrina amin'ny alàlan'ny tohana avy aminà fikarakarana hetsika ara-kolontsaina iray.
Famahanana ireo 320 tapitrisa: Tsy Ho an'ny Tsy Miankina Izany Ny Fiovàna, avy amin'i Kenneth Tin-Kin Hung.
Ny Occuprint.org dia nitahiry ireo saribe fanao peta-drindrina noforonina ho an'ireo filasiana occupy nanerana ny firenena sy izao tontolo izao. Ny fandikàn'ilay mpanakanto Kenneth Tin-Kin Hung ilay hetsika (jereo etsy an-kavanana) dia ahitàna “Famahanana ireo 320 tapitrisa: Tsy Ho an'ny Tsy Miankina Izany Ny Fiovàna” ary azo sintonina ao amin'ny vohikalany.
Ny hafatra tian'ilay saribe hampitaina dia aminà fifangaroana mari-pamantarana Amerikana. i Ramatoa sarivongan'ny Fahalalahana (Lady Liberty) dia mamindra mandroso vonona hiatrika izay fanamby rehetra misy. Tsy manakana azy amin'izany ny rafi-pahefana kapitalista. Soa ihany izy fa manao kiraro mampahazo aina tsara, satria mety ho lava ny dia!
Ilay mpanakanto, Paul-Felix Montez, dia manao fanentanana anaty aterineto mba hananganana sary vongana iray mirefy 120 metatra ao amin'ny Kianja Zucotti ao New York,mifototra amin'ny asa famoronany manokana ho an'ny Occupyface na ny Endriky ny Bodoy izay avy eo dia navoakany ho saribe, saron-tava, sokitra ary hosodoko.
Bodoy anaty Literatiora
Ny Tranombokim-bahoaka dia tranomboky iaraha-mitantana, iraisana, misokatra izay ny OWS no mandrindra azy. Ry zareo dia nampakatra angon-tnonkalo iray (PDF) izay ahitàana ny fomba fijery voarakitra an-tsoratr'ireo mpanohana ny hetsika, tsy manaraka antanan-tohatra na fandaharana voafaritra. Anatin'ireo asa ao anatin'ny angona faramparany natan-dry zareo ny Lost Highway nosoratan'i Masha Tupytsin. Ny mpanoratra dia miteny mikasika ilay hetsika amin'ny fomba somary voapasoka sy voaloko hafakely : mpifankatia roa ao anaty tontolo iray izay malalaka ny fanehoana fihetsehampo, tsy amin-tahotra ny fitsarantsarana.
Anaty torimaso, anaty fitiavana, sleep, in love, mifampitankosinkosina eo izahay roa, ao anatiny sy ivelan'ilay tontolo, lalankely mifanapatapaka, toy ireo mpilalao ao anatin'ny Lost Highway, afa-tsy ny hoe izaho no ilay fanalokalofana milalao ivelan'ny hazavana, na ilay fanalokalofana milalao ny toeran'ilay blonde (ianao io). Ary nandritry ny efapolo minitra farany, taorian'ny nahadiovan'ny morontsiraka, rehefa tena lasa daholo ireo tsy valaharanony farany, dia nitsangantsangana teny amin'ny tara nifampitantana tao anaty rotsin'ny mozika isika. Teny amin'ny araben'ny nofy dia voaaisotra ny fiara, nazava be sy toy ny volafotsy, tahakla ny lalana ao an'alan'i Redwood tamin'ny E.T. na ilay volana taorian'ny bisikiletin'i Elliott, ary tsy nisy afa-tsy isika, Adama sy Eva amin'ny gadona “punk-rock”, isika miatrika ny zavatra rehetra, isika voalohany indrindra, na ny farany, afa-tsy ny hoe tsy avy aminao aho na avy amin-jaridaina itsy na iroa.
Bodoy anaty Mozika
Misy tambatra iray an'ireo mpiangaly mozika manohana ny Occupy Wall Street azo raisina ao amin'ny vohikalan'ny Mozika ho an'ny Bodoy. Iray amin'ireo tarika, ny Aeroplane Pageant, dia mihira mikasika ny hatendan-kanina aseho ho toy ny “Aliaka dia kely masiaka ratsy”. Ilay tarika My Pet Dragon dia mihira ny “Love Anthem” na “Fanevan'ny Fitia” ho toy ny fanefitry ny adin-tsaranga. Asongadin-dry zareo ihany koa ny asan'ilay mpanoratra tononkira no sady mpihira, Jackson Browne, izay niantsehatra tao Washington, D.C. tamin'ny Desambra lasa teo. Ny fomba nihirany ilay hira hoe “I Am a Patriot” dia nasongadina ao amin'ny YouTube.
Ireo hiran'ny Occupy koa dia hita amin'ny fahana Twitter @OccupyMusic izay ahitàna ireo mpiangaly mozika miahy tena mamoaka rohy mankany amin'ny tononkira tsy falin'izy ireo sy ny tahiriny.
Bodoy sy ny Seho an-tsehatra
Ireo vondrona teatra tsy miankina sy mpanakanto mpisehatra dia niakatra teny an-tsehatra nandritra ny 24 ora tamin'ny Zoma 2 Desambra 2011 tao amin'ny Paramount Plaza ao New York City (mnoòena anarana hoe ny “Toerana Fiakarana An-tsehatry ny Vahoaka”) izay ao amin'ny Teatran'ny distrika ao Broadway. Ny lahatsary Bodoy i Broadway avy amin'i GammaBlog, bilaogy iray ao New York momba ny politika, ny fotodrafitrasa ary ny taokanton'ny arabe, dia manome jery maika ny mpilalao mpanohitra.